Miresaka momba ny fikorontanan'ny toetrandro | Reef Resilience
Mety hiatrika adihevitra sarotra momba ny fiovan'ny toetrandro ny mpitantana ny haran-dranomasina. Ny fananana fitaovana hiresahana momba azy io amin'ny fomba mahomby dia fanalahidin'ny fanitarana ny fahatsiarovan-tena sy famporisihana ny hetsika ilaina tokoa.
Nandritra ny am-polony taona lasa izay, fanadihadiana maro no nandinika ny fomba hiresaka mahomby kokoa momba ny fiovan'ny toetrandro. Ny roa amin'ireo tolo-kevitra lehibe indrindra dia: 1) fantaro ny mpihaino anao; ary 2) ataovy izay hahasarika ny mpihaino anao (aza manao lahateny, henoy izay tiany ary miresaka momba ny fiovan'ny toetrandro amin'ny toe-javatra misy azy ireo). Ny hafatra tsotra, miverimberina matetika, ataon'ny mpitondra hafatra matoky dia mahery. ref
Ny fitaovan'ny fifandraisana amin'ny fiovan'ny toetr'andro izay nasehon'ny mpiasa avy amin'ny Fikambanana Conservation of Pohnpei. Sary © Meghan Gombos
Ireo lahateny mahaliana
Ankoatra ny fanalahidy lahateny Amin'ny fiovan'ny toetr'andro, ireo manampahefana an-dranomasina koa dia manaiky ny herin'ny fampiroboroboana lahatsary fandraisana anjara mba hisambotra ny fomba fijery eo an-toerana momba ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny valiny.
Fitsipika fototra amin'ny fifampiresahana momba ny fikorontanan'ny toetrandro ref
Fantaro ny mpihaino (oh: ny soatoaviny, ny asa, ny ahiahiny). Raha azonao atao ny mampifandray izay tian'ny mpihaino anao amin'ny fiovan'ny toetr'andro, dia mihaino kokoa izy ireo.
Mifandray amin'ny soatoavina iombonana. Olona maro no manomboka ny resadresaka amin'ny firesahana momba ny siansa momba ny fiovan'ny toetr'andro (izany hoe, ny antony sy ny vokany). Na izany aza, raha tianareo ny hikarakarana sy hikarakaran'ny olona, ​​dia mila mametraka ny olana mifandraika amin'izy ireo ianareo. Mba hanaovana izany, manomboha amin'ny fifandraisana amin'ny soatoavina izay mitondra ny olona miaraka (ohatra: fianakaviana, fahasalamana, fiarahamonina)
Fiafarana avy amin'ny olona mankany amin'ny planeta. Fantatry ny olona ny zavatra hitany manodidina azy. Miresaha momba ny fiantraikan'ny toetr'andro sy ny loza mety hitranga (ohatra ny rivo-doza, ny fivalanana ho an'ny haran-dranomasina), avy eo manakatra ny faritra hafa ao amin'ny firenena na ny planeta. Manomboka amin'ny loza iraisampirenena manjaka ny fatalisma, satria maro ny olona tsy afaka mahita ny mety haha-tratra ny hetsika tahaka izany.
Ampiasao ny teny azon'ny olona azonao. Maro ny fiovan'ny fikorontanan'ny toetrandro, toy ny "miteraka", tsy midika ho an'ny olona. Ampiasao kosa ny teny toy ny fiomanana na ny fiomanana. Aza miresaka momba ny "angovo hafa", fa miresaka momba ny rivotra sy ny masoandro. Raha tokony ho ny "fandringanana ny tontolo iainana" dia resaho ny zavamaniry sy ny biby izay miankina amin'ny fivelomana. Ny fiteny mandresy lahatra dia mazava, mahazatra, ary manoritra.
Manentana sy manome hery. Ny zavatra manan-danja indrindra atao mba ahafahan'ny olona mandray anjara amin'ny fiovan'ny toetr'andro dia ny mampita ny fahatsapana ny fanantenana sy ny hery anaty. Manomeza ohatra mivaingana amin'ny hetsika sy ny vahaolana; manome vahaolana bebe kokoa noho ny olana.
Nisy horonantsary momba ny vahaolana momba ny fiovaovan'ny toetr'ireo mpianatra ao Samoa izay naseho tamin'ny sarimihetsika Action4Climate International misokatra amin'ny varavarankely vaovaofifaninanana. Sary © Action Against Climate Change
Manam-pahefana farafaharatsiny 1 avy amin'ny mpitondra hafatra azo itokisana. Ny zava-misy iray na roa manana hery ara-pihetseham-po be dia be dia afaka manampy lanja lehibe amin'ny hafatrao. Ny iraka natoky tena - samy hafa amin'ny mpihaino samihafa - dia manome ny fahatokisana sy ny maha-zava-dehibe azy. Mitadiava teny nindramina tsara sy mifandraika amin'ny olona fantatry ny mpihaino sy itokisanao.
Manomàna, aza manamboatra. Ny fampifanarahana dia teny tsy mampihetsi-po izay mitondra amin'ny fatalisma sy fametraham-pialana. Tsy afaka manao na inona na inona momba izany ianao. Ny fiomanana, etsy ankilany, dia mitarika ho amin'ny asa. Ny fiomanana dia midika fa misy olana izay azontsika atao.
Fiatoana avy amin'ny "tsy fahazoana antoka" amin'ny "risika". Ny ankamaroan'ny olona dia ampiasaina hiatrehana ny hevitra mety hitranga. Izany no fitenin'ny fiantohana, fahasalamana ary sehatra fiarovam-pirenena. Noho izany ho an'ireo mpihaino maro (ohatra, mpanao politika, mpitarika raharaham-barotra) miresaka momba ny mety ho fiovan'ny fikorontanan'ny toetrandro dia mahomby kokoa noho ny miresaka momba ny tsy fiovaovan'ny fiovan'ny toetr'andro.
Miresaha amin'ny alalan'ny sary sy tantara. Ny ankamaroan'ny olona dia mahatakatra an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny tantara sy ny sary, fa tsy lisitra tarehimarika, fanambarana azo antoka na grafika, ary noho izany dia zava-dehibe ny hahitana fomba handikana sy handikana ny teny teknika amin'ny tatitra siantifika amin'ny zavatra hafa.
Ity manaraka ity dia ohatra iray momba ny fanambarana fohy izay ahitana ireo fitsipika maromaro etsy ambony:
Ny vatoharin'izao tontolo izao dia zava-dehibe amin'ny olona; manome fiarovana amoron-dranomasina, sakafo (fisaka), fidiram-bola amin'ny fizahan-tany, fanafody, ary matetika mitazona ny lanjany ara-panahy sy ara-kolontsaina. Ny vatohara dia atahorana ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fiantraikan'olombelona hafa. Saingy misy zavatra azontsika atao mikasika izany. Ny ho avy dia eo an-tanantsika. Ny fitantanana ny haran-dranomasina mahomby izay mihevitra ny fiovaovan'ny toetrandro dia hanampy amin'ny fiarovana ny haran-dranomasina sy ny fiarovana ny tombony omen'izy ireo.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMiresaka amin'ny toetr'andro: 13 Dingana sy fitarihanamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTetikasa Yale momba ny fifandraisana amin'ny fiovan'ny toetrandro
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoThe Handbook Uncertaintymanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoIreo horonan-tsary mandray anjara avy any Pasifika
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoLahatsary mandray anjara amin'ny feony amin'ny vahoaka Pacific